China Sansevieria Lotus ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Anwụ na-acha Ifuru
Sansevieria Trifasciata bụ ụdị osisi okooko na ezinụlọ Asparagaceae, nke sitere na West Africa nke ebe okpomọkụ site na Nigeria n'akụkụ ọwụwa anyanwụ na Congo. A maara ya nke ọma dị ka osisi lotus, ire nne di ya, na hemp eriri afọ, tinyere aha ndị ọzọ.
Ọ bụ osisi na-eto eto mgbe niile na-akpụ okirikiri, na-agbasa site na rhizome ya na-akpụ akpụ, nke bụ mgbe ụfọdụ n'elu ala, mgbe ụfọdụ n'okpuru ala. Akwụkwọ ya ndị siri ike na-eto site na basal rosette. Akwụkwọ ndị tozuru oke bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gbara ọchịchịrị na-eji ọla edo na-acha uhie uhie ma na-esite na 15-25cm n'ogologo na 3-5cm n'obosara. gbara ọkpụrụkpụ ma gbakọọ dị ka lotus ọkara emeghe.
Anyị na-akwadebe ngwaahịa anyị na nkwakọ ngwaahịa kwesịrị ekwesị dịka ụkpụrụ ụgbọ mmiri mba ofesi si dị. Anyị nwere ike ịhazi ụgbọ elu ma ọ bụ ụgbọ mmiri na-efu ọnụ dabere na oke na oge achọrọ. Mbupu na-ejikarị njikere n'ime 7 ụbọchị mgbe na-anata ego.
Nke gara aga: Sansevieria Moonshine
Osote: Atụmatụ Potted Sansevieria Laurantii Maka Homechọ Mma Homelọ
White Snow Superba
China Osisi Osisi Alocasia Macrorrhiza Maka Decora ...
Osisi Ornamental Microcarpa Ficus Root Shape
Anọgide S Shaped Ficus Microcarpa Bonsai